Industrylọ Ọrụ Ahịa Ahịa Ga-agụrịrị Ndepụta Angie | Martech Zone
Industrylọ Ọrụ Ahịa Ahịa Ga-enwerịrị Ndepụta Angie
Tuesday, July 31, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Okwu ọnụ na-ekere òkè dị ukwuu n'ịmepụta ihe oyiyi dị mma ma na-akpali atụmanya ime ngwụcha ikpeazụ ahụ n'ime ịzụrụ ma ọ bụ ịkwado ọrụ. Weebụ nwere plethora nke saịtị nyocha… ọtụtụ n'ime ha na-emeghe ndị ọrụ na-amaghị aha ha enweela nsogbu n'ihi ndị na-asọ mpi na nyocha ụgha. Saịtị saịtị ndị a merie ndị asọmpi na-enwe olileanya imebi aha gị.
Azụmahịa juru anya ịchọpụta otu dị iche iche ndị ahịa anyị, Ndepụta Angie, bụ. Na ndepụta Angie, gị akaụntụ azụmahịa bụ n'efu. A na - ewu aha gị site na isi ndebanye ndebanye nde 1.5, ha niile debara aha ha na - akwụkarị ndị debanyere aha, na - ewepu ohere nke adịgboroja ma ọ bụ nyocha ndị na-adịghị mma. Ndepụta Angie na-enye ọrụ mgbasa ozi iji hụ na akọwara nke ọma. Ọrụ a aghọwo ihe ewu ewu nye ndị ọrụ ya na ndị mmadụ na-achọkarị Ndepụta Angie + ije ozi na obodo!
Ndepụta nke Angie bụ onye na-ahụ maka mba ndị tụkwasara obi na ndị ọrụ ngo na ndị dọkịta n'ihe karịrị 550, dị ka elu ụlọ, ndị ọrụ mmiri, ndị na-ehicha ụlọ na ndị eze. Ihe karịrị ndị otu nde 2 na-elele Ndepụta Angie iji chọta ndị na-enye ọrụ mpaghara kachasị mma ma chekwaa na ọrụ na mbelata ndị otu
Ndepụta Angie emepe peeji maka ulo oru obula ma nyefee kredit akuko A to F maka ulo oru. Ọrụ ahụ na-agba ndị ahịa ume inyocha ọnụahịa, ogo, ịzaghachi oge, oge na ọkachamara, na akara ule na-egosipụta ngụkọta nke nyocha ndị ahịa.
Azụmaahịa enweghị ike ịkwụ ụgwọ iji nọrọ Ndepụta Angie ma ọ bụ na-emetụta ọkwa ahụ n'ụzọ ọ bụla, mana ịdenye aha na-enye gị ohere ịnweta ọkwa email ka ị nwee ike:
Jikwaa aha gị site n'ịgụ na ịza akụkọ na nyocha banyere azụmahịa
Mepụta ụlọ ahịa iji melite ozi azụmahịa, nye ọrụ na ego iji rata ndị ahịa
Na-akwalite nnukwu ọkwa gị ozugbo ha rụzuru!
Na nnukwu ọkwa, Ndepụta Angie na-enyekwa gị ohere kesaa amụọ nye obodo.
n'ihi na Ndepụta Angie dị oke nkpa banyere ịbụ onye a tụkwasịrị obi, nke ziri ezi, ụlọ ọrụ gị ga-erite uru site na nyocha ziri ezi nke ndị ahịa n'ezie. Ka ị na-arụ ọrụ, ị kwesịrị ịkwanye ndị ahịa gị ka ha nyochaa ụlọ ọrụ gị na ndepụta Angie ka ị nwee ike ị nweta akararịrị ka mma na azụmaahịa gị. Otu ị nwetara ume, gbaa mbọ hụ na i ritere uru azụmaahịa Angie na akwụkwọ mgbasa ozi. Ndị obodo na-ama jijiji banyere azụmahịa ebe ọ bụ na ha ghọtara ma tụkwasị obi na azụmaahịa ndị enyere ka ha kpọsaa ebe ahụ!
Industrylọ ọrụ ọrụ ọ bụla dị mkpa maka aha ha kwesịrị ijikwa ma kwalite ọnụnọ ha na ndepụta Angie. Deba aha taa!
Tags: Ndepụta Angiemmụọ iwenyocha ndị ahịaNyocha banyere ntanetịNyocha
Buddy Media na Ahịa ahia ahia